warplanes Russian vakamhanyira munharaunda Swedish pasina mvumo | Apg29
warplanes Russian vakamhanyira munharaunda Swedish pasina mvumo
Three Russian ndege muchiuto nendege pasina mvumo munguva pfupi nguva iri ndima Swedish musi weMugovera. A SIGINT ndege, uye vaviri warplanes nendege pamusoro Karlshamn.
A Russian ndege kuti mhando IL-20 akaita nendege mhiri kweGungwa reBaltic pamwe nemamwe murwi maviri ndege yacho mhando SU-27 pachiuno.
Tiri kurarama munguva yakaipisisa, saka tinofanira kupfuura kurarama pedyo naJesu. Pane zvakawanda zvakasiyana kutyisidzirwa Sweden, zvose zvemukati uye kwokunze vanotyisidzirwa.
Kupfuura kare tinofanira kuva kunyange zvakanyatsojeka nevhangeri raJesu Kristu. Zviri chete Jesu anogona kuponesa uye kununura vanhu venyika yedu.
Saved ndokununura wava kana iwe pachako kugamuchira Jesu saIshe.